Portrait/ Nandrianina : ilay mpisolo vava ny ankizin’ny lalana | Grandir à Antsirabe
PORTRAIT : Nanampy tao amin’ny « administration » no nanombohan’i Nandrianina tato amin’ny fikambanana. Ankoatran’izay dia mpiandraikitra ny asa fanentanana mahakasika ny fahasalamana ara-pananahana nandritra ny « maraude » ihany ko izy. Amin’izao fotoana izao kosa dia izy ilay tovavy, lava tongotra, mitety sekoly sy fikambanana maro eto Antsirabe (na tsy eto koa). Ny anton-dia ? Manao fanentanana sy mizara traikefa (any amin’ny fikambanana) mahakasika ny fiainan’ireo ankizy miaina eny an-dalana.
Mba lazaoa anay kely hoe ry Nandrianina ny atao amin’izany « manentana sy mampahafantatra momba ny ankizy miaina eny an-dalana » eny anivona sekoly sy rafitra samihafa izany ?
Ity tetikasa ity aloha dia vao napetraka ny faraparan’ny taona 2018 teo. Tanjona kendrena amin’izany ny hampahafantatra ny olona sy ny firaha-monina ny « zava-misy » iainan’ireny ankizin’ny lalana ireny. Izay fampahafantarana izay avy eo no « hanentanana » azy ireo hanova fijery (sy fihetsika na fomba fanao) manoloana ireny ankizy ireny.
Talohan’ny namolavolana ilay « endrim-panentanana » ho atao amin’ny olona sy eny anivon’ireo sekoly, dia nanao fanadihadihana teny ifotony aloha ny tenako, hahafantarana ny hevitra sy ny fandraisan’izy ireo ireny « ankizin’ny lalana » ireny (be fanontaniana be). Ireo angon-kevitra tamin’izany no nandrafetana « ny fanentanana » avy eo.
Somary maha lava tongotra kely ilay asa !
Dia ohatry ny ahoana ny dingana atao rehefa andeha hanentana any amina sekoly iray ?
Mila manatona any amin’ilay sekoly aloha voalohany indrindry. Ho an’ireo sekoly tsy miankina dia tsy dia sarotra ny dingana atao satria miresaka amin’ny talen’ny sekoly fotsiny dia mety : mila mahay miresaka tsara. Fa ho an’ny sekolim-panjakana dia tsy maintsy nangataka alalana tany amin’ny « chef CISCO Antsirabe I, fa efa azo ilay izy (rehefa niandry maharitra).
Rehefa mahazo alalana avy amin’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny dia miroso amin’ny fanentanana. Raisina isaky ny kilasy ny ankizy na arakarakin’ny fandaminana amin’ny ora eo. Harindra mifanaraka amin’ny fotoana ihany koa ny halavan’ny fanentanana atao.
Dia Nandrianina ve izany tonga dia miresaka be fotsiny sa manao ahoana ny atao ?
Tsy miresaka be ka, fa atao amina endrika kilalao ilay izy, amin’izay tsy mora mankaleo. Misy « quizz » atao ohatra hanombohana azy. Avy eo misy kilalao izay hangalan’ny ankizy toerana ankizin’ny lalana iray. Dia hamaranana azy ilay « slam : handao hanova fijery ».
Tsy mitovy ny endrikin’ny fanentanana atao amin’ny ankizy kely sy ny tanora : efa manana endrika fanentanana maro. Raha any amin’ny fikambanana indray dia somary lalindalina kokoa.
Mahaliana izy izany, fa ono oa e, inona no nifidiananao an’ny Grandir à Antsirabe ?
Te hanampy ireo ankizy tra-pahasahiranana aho.
Mba zarao aminay ary hoe ny fahatsiaravana nanamarika anao tato amin’ny fikambanana ?
Ny fihaonako tamin’ireo ankizy matory eny an-dalana nandritran’ny « maraude » voalohany ntaoko. Nampihetsimpo ahy tokoa ny fomba nandraisana ahy.
Inona kosa ary ny firariny ataon’i Nandrianina ho an’ny fikambanana amin’ny taona ho avy rehetra e ?
Manantena aho hoe : Hahavita hanala ireo ankizin’ny lalana eny an-dalambe ny fikambanana. Tsy midika akory izany hoe tsy hisy intsony ny fikambanana fa ho tanteraka ny nofiny sady afaka hanampy olona.
Vorona ! (manidina), afaka mibanjina ny tontolo avy eny ambony eny e ! Mahita ny zava-misy sady afaka miasa haingana.
« Cafés gourmands » mitovy amiko mihintsy, afaka mifanaraka amin’ny zava-misy rehetra, ohatran’ny « cafés gourmands » tian’ny olona rehetra.
Raha film ?
Film « the Choice » ; tantaram-pitiavana olondroa, nanamarika be ahy tamin’ny tantaran’izy ireo ny hoe « mila misafidy ianao eo amin’ny fiainana » (ary miankina amin’izany ny ho avinao).
Sarotra amiko ny mamerina fifandraisana efa tapaka : tsy mora mamela. Fa za kosa anefa dia olona tena mora ifandraisana.
Avy amiko ity fa tsy nindramako : « Tsy ho tanteraka mihintsy ny nofy iray raha tsy ianao ihany no manao ny ezaka rehetra ahatanterahan’izany. »
MG	« Maraude » : andao ho resahantsika !